Lionel Messi Waa Xidigii Abid Ugu Fiicnaa Ee La Liga Ka Ciyaaray- Madax Waynaha La Liga Ee Javier Tebas. - Gool24.Net
Lionel Messi Waa Xidigii Abid Ugu Fiicnaa Ee La Liga Ka Ciyaaray- Madax Waynaha La Liga Ee Javier Tebas.
Madax waynaha horyaalka La Liga ee Javier Tebas ayaa amaan wayn huwiyay kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi.
Javier Tebas ayaa cadeeyay in Lionel Messi uu yahay xidigii taariikhda horyaalka La Liga abid ugu fiicnaa ee La Liga.
Lionel Messi ayaa koobkiisii 10 aad ee la Liga waxa uu xili ciyaareedkan ka soo caawiyay Barcelona isaga oo waliba gool dhalinta hogaaminaya.
Laakiin Lionel Messi ayaa ah xidiga haysta gool dhalinta abid iyo waliba gool caawinta abid ee La Liga.
Javier Tebas ayaa hore u shaaciyay in ay samayn doonaan abaal marin magaca Messi ku qoran yahay oo ciyaartoyda la siin doono.
Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Rual , Cristiano Ronaldo iyo magacyo badan oo ka soo ciyaaray La Liga ayuu Tebas ka saraysiiyay Messi.
Inkasta oo uu Javier Tebas yahay taageere aan qarsan in uu kooxda Real Madrid tan iyo yaraantiisii uu soo taageerayay, haddana waxa uu si wayn u amaanay Messi oo Barcelona u soo dhaliyay in ka badan 400 gool oo La Liga ah.
Javier Tebas oo Lionel Messi amaanaya ayaa yidhi: “Isagu waa ciyaartoygii taariikhda La Liga ugu fiicnaa wuxuuna u qalmaa in noloshiisa oo dhan uu gurigiisa noqdo. Waligeed mar kale ma jiri doono qof isaga oo kale ahi”.
Javier Tebas ayaa qiray in Messi ay saamaysay soo laabashadii layaabka lahayd ee Liverpool ku samaysay Barca wuxuuna yidhi: “Isaga waxaa yara sameeyay wixii soo dhacay maalmaas ugu danbeeyay”.
Iyada oo kadib murugadii Anfield shaki la galiyay mustaqbalka Messi iyo Barcelona ayuu Javier Tebas erayo kooban ka yidhi: “Anigu ma filayo in uu isagu ka baxayo Barcelona”.
Lionel Messi ayaa isku diyaarinaya in uu ciyaaro kulanka horyaalka La Liga ugu danbeeya si uu si rasmi ah ugu xaqiijisto in uu difaacaday abaal marinta gool dhalinta la liga ee Pichichi.
Laakiin Messi ayaa sidoo kale si rasmi ah u xaqiijisan doona in uu markii lixaad ku guulaystay kabta dahabka ah ee gool dhalinta Yurub taas oo markale noqon doonta rekoodhkiisii hore oo uu sii dheeraysanayo.